Ciidamo la kala dhex-dhigay Ciidamadii ku dagaalamay Muqdisho - Awdinle Online
Ciidamo la kala dhex-dhigay Ciidamadii ku dagaalamay Muqdisho
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa xalay la kala dhex-dhigay Ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya balse qaab qabiil u abaabulan oo shalay ku dagaalamay xaafado ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Dagaalka ayaa waxaa uu sigaar ah ugu dhaxeeyay Sarkaal lagu Magacaabo Ismaaciil Xaadoole oo ka tirsan Ciidamada Millateriga Soomaaliya & Sarkaal kale oo Magaciisa lagu soo koobay joorre oo ka tirsan Minashiibiyada Gobolka Banaadir, waxaana ay isku heysteen dhul Kaawo laga qodo oo ku yaalla degmada Kaaraan.
Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya oo uu horkacayay Janeraal Gacma-dulle oo ka tirsan saraakiisha Ciidamada Millateriga ayaa la geeyey goobihii ay ku dagaalamayeen labada Ciidan, iyaga oo sugaya Amniga.
In ka badan 10 ruux oo isugu jira Askar iyo Shacab ayaa ku geeriyooday dagaalkii shalay ka dhacay degmada Kaaraan halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen, waxaana sidoo kale jirtay Guryo ku gubtay Qoraga Baasuukaha loo yaqaano oo ay labada dhinac isku ridayeen.
Wararka saaka aan ka heleyno xaafada ku teedsan Xeebta degmada Kaaraan ee shalay uu dagaalka ka dhacay ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan, isla markaana ay socoto waan waan ku aadan sidii xal looga gaari lahaa dagaalkaas.
Previous articleMadaxwenaha Soomaaliya oo gaaray dalka Jabuuti
Next articleShirka IGAD oo furmaya & Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb-galaya